Accueil Ireo Sampana Antoko Mpihira Famerenan-kira 05-09-2015
“Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika”. 1 Korintiana 10:6
Ny tantaran’ny Zanak’Israely ao amin’ny baiboly dia ahitan’ny mpino rehetra fananàrana maro dia maro tokoa.
Ireo fihetsika nasehon’ny zanak’Israely, sy ny vokatr’izany dia tena ohatra sy fananarana tsy tokony ho adinoina tokoa, satria Andriamanitra dia tsy manao tsinontsinona ny ota, ary manasazy tokoa noho izany.
Ny vahaolana nananan’ny Zanak’Israely hialàny tamin’ny ota dia ny vaovao mahahafaly. Na ny màna tany an’efitra, na ny vatolampy niboiboika rano nosotroiny rehefa nangetaheta izy, dia fampisehoan’I Jehovah tamin’izy ireo ny vaovao mahafaly izany, tsy iza fa Jesoa Kristy.
Izy irery ihany no hafatra entina hiainana isan’andro mba hanoherana ireo fitsiriritana ratsy sy ny fakam-panahy maro samihafa, mba tsy hanompoan-tsampy.
Izany fampianarana maro ao amin’ny tantaran’ny Zanak’Israely izany, dia tokony hahatonga ny Kristiana rehetra, hahatsapa ny fahalemeny, ary hahatonga azy hitady izay vahaolana mety ho ilainy eo amin’ny fiainany, avy ao amin’ny vaovao mahafaly irery ihany, dia Jesoa Kristy.